प्रहरीको अचम्मको सन्देशबाहक: फोन बन्द हुने बित्तिकै परेवामार्फत यसरी पठाउछ्न् सन्देश! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»प्रहरीको अचम्मको सन्देशबाहक: फोन बन्द हुने बित्तिकै परेवामार्फत यसरी पठाउछ्न् सन्देश!
प्रहरीको अचम्मको सन्देशबाहक: फोन बन्द हुने बित्तिकै परेवामार्फत यसरी पठाउछ्न् सन्देश!
By पूजा बानियाँ on २३ बैशाख २०७५, आईतवार ११:२८ रोचक खबर
पुरानो जमानामा कुनै पनि सन्देश पठाउनको लागि हुलाकको प्रयोग गरिन्थ्यो। तर तपाईलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्नेछ कि अहिलेको टेलिफोन, इन्टरनेटको जमानामा पनि आफ्नो संदेश पठाउनको लागी परेवाको प्रयोग गर्छन। केहि मानिस परम्परागत संचार व्यवस्थालाई कायम राख्नको लागि यसको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
जानकारी अनुसार ओडिशाको एक सरकारी विभाग आजको डिजिटल युगमा पनि केहि सन्देश पठाउन परेवाको प्रयोग गर्छन। फिल्मी पर्दामा नभई वास्तविक जिन्दगिमा पनि परेवामार्फत संदेश पठाउने व्यवस्था ओडिशामा अझै पनि जीवित छ। ओडिशाको पुलिससंग ५० परेवाहरुको एक समुह रहेको छ। जो विशेष काममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा संदेश लिएर जानको लागि प्रशिक्षित छ। हालै यी ५० ओटा परेवाको लागि ट्रायलको योजना गरिएको थियो। यस समयमा पुलिसले परेवामार्फत ठाउँमा भुवनेश्वरको ओयूएटी ग्राउंडबाट कटकसम्म संदेश पठाएका छन्।
वास्तवमा यस अभ्यासको मुख्य उद्देश्य आपति व्यवस्थापनको लागि हो। यदी कुनै कारणवश आधुनिक संचार प्रणाली अर्थात् फोन बन्द भयो भने पुलिसले यस पारम्परिक माध्यममार्फत आफ्नो संदेश आदान-प्रदान गर्न सक्छन। यो परेवा प्रतिघण्टा ७५ किमिको गतिमा उड्न सक्छ। साथै यस परेवालाई एकपटक प्रशिक्षण दियो भने लामो समयसम्म काम गर्न सक्छ ।